Brothersmụnne pere mpe Belfast FSX & P3D nsogbu
Brothersmụnne pere mpe Belfast FSX & P3D nsogbu 2 afọ 7 ọnwa gara aga #837
Na nkenke, AP adịghị arụ ọrụ zuru oke. Elu ugwu, ọsọ na ọsọ ọsọ dị mma, ma ọ dịghị eso ụzọ GPS ọ bụla. Ihe ndị ọzọ dị mma, ụgbọ elu dị mma.
Brothersmụnne pere mpe Belfast FSX & P3D nsogbu 2 afọ 7 ọnwa gara aga #838
ị tinyere ya na ọnọdụ GPS? LOL Ama ihe igodo ị nwetara maka nke a ma ọ bụrụ na ọ nweghị ngbanwe ọ bụla ma na Ibu, ọ bụ Ctrl ịgbanwee N
Brothersmụnne pere mpe Belfast FSX & P3D nsogbu 2 afọ 7 ọnwa gara aga #839
Hey Gh0st, gini ka?
Ndi ihe niile ziri ezi. Na AP ya onwe ya, bụ mgbanwe, ya mere, ọ ga-esiri ike karịa nke ahụ.
Brothersmụnne pere mpe Belfast FSX & P3D nsogbu 2 afọ 7 ọnwa gara aga #840
nke ọma, mgbe ahụ, kpoo ọkụ ụlọ ọrụ gị
Brothersmụnne pere mpe Belfast FSX & P3D nsogbu 2 afọ 7 ọnwa gara aga #841
Haha .... na-akpa ọchị.
Lol..yeah, ma eleghi anya onye nzuzu di elu mgbe o na-emegharia gburugburu AP ....
Brothersmụnne pere mpe Belfast FSX & P3D nsogbu 2 afọ 4 ọnwa gara aga #938
Lelee faịlụ CFG na ngalaba autopilot, ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta nsogbu na ebe ahụ, nwaa itinye autopilot CFG ụgbọ elu ọzọ, ma ọ bụ tinye Nav / GPS ịgbanwee n'ụgbọ elu ọzọ ka 2D gbapụta ma tinye ya na nchekwa panel